Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Hay’ada FBI ee Dalka Maraykanka oo Su’aalo Waydiisay Hillary Clinton.
Haweenayda u tartamaysa xilka Madaxweynaha ee dalka Maraykanka Hillary Clinton ayaa iskeed u hortagtey hya’adda FBI waxaana laweydiiyey su’aalo laxidhiidha e-mailkii ay isticmaashey xiligii ay ahayd Wasiirka Arimaha Dibada ee dalka Maraykanka.
Hillary Clinton ayaa horey raaligelin uga bixisey in ay isticmaashey e-mailkeeda khaaska ah ah iyo Server ay si gaar ah u lahayd xiligii ay ahayd Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Maraykanka.
Baaritaankan FBI ayaa la xidhiidha in ay si khaldan u isticmaashey arrimo sir ah, waxaana uu imaanayaa baadhitaankan cusub iyadoo todobaadkii hore la ogaadey in weerarkii ka dhacay Qunsuliyada uu Maraykanku kulahaa magaalada Benghazi ee dalka Liibiya aysan waxba ka ogeyn oo wax digniin ah loosoo dirin.
Hillary Clinton ayaa sugeysa dhamaadka bishan aan ku jirro ee July in loo caleema saaro Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ee u tartamaysa xilka Madaxweynaha bisha November, taageerayaasha Bernie Sanders ayaan weli quusan waxayna aaminsan yihiin in Hillary Clinton lagu heli karo dembi taasoo fursad siinkarta Sanders.
Ninka sida weyn uga soo horjeeda ee la tartami doona bisha November Donald Trump ayaa arrinta E-mailka ay isticmaashey u ahaa hubka ugu weyn ee uu wax ugu dhimayo sumcadeeda.